FLV Splitter: Olee otú SPLIT FLV Files Fast (Windows 8 gụnyere)
> Resource> Video> FLV Splitter: Olee otú SPLIT FLV Files Fast (Windows 10 gụnyere)
Ọ bụrụ na ị nwere okosobode otu ma ọ bụ karịa n'ime nsogbu ndị a, ị na-nri ebe.
The FLV video ogologo karịa 15 nkeji otú apụghị uploaded YouTube
The FLV video faịlụ ndị oke buru ibu. Ị mkpa ebipụ ha n'ime iberibe.
Chọrọ kewaa FLV video faịlụ n'ime ọtụtụ FLV video faịlụ; ọ dị mma aka nile ọzọ media faịlụ (dị ka Super)
All m chọrọ ime bụ ịchọta a dị mfe omume na-iri ma FLV video faịlụ n'ime 30 nke abụọ iberibe.
FLV splitter na Wondershare Video Converter Ultimate (Windows 8 na-akwado) pụrụ inyere gị aka mezuo niile n'elu nsogbu. Ọ na-ekwe ka ị na-kewaa FLV faịlụ n'ime obere agba na iji tọghata iche iche faịlụ na ọ bụla mgbe formats. Ugbu a FLV splitter ngwá ọrụ na gbawara n'etiti FLV video n'ime agba ngwa ngwa na-enweghị àgwà ọnwụ.
Main ọrụ nke Video Converter Ultimate
Kensinammuo interface gbawaa FLV faịlụ
Ugboro 6 ngwa ngwa na multi-processors
Ọ dịghị ọnwụ nke video àgwà
Nkwado kewara FLV, MP4, WMV, MPEG, AVI, na ihe nile na-ewu ewu formats
All-na-otu video software: FLV splitter, FLV joiner, FLV Ntụgharị
Easy Nzọụkwụ na Split FLV Files
Ugbu a lelee mfe nzọụkwụ gbawaa ihe FLV video ka agba na mbupụ ikewapụ faịlụ ngwa ngwa na mfe.
Nzọụkwụ 1: Ibu Ibu FLV faịlụ
Mgbe ibudatara Video Ntụgharị, wụnye ihe omume na-emeghe ya mgbe okokụre. Ị ga-ahụ bụ isi windows dị ka n'okpuru. Pịa "Tinye Files" button iji họrọ FLV faịlụ na ị chọrọ, na pịa Open ịgbakwunye ha ka ha usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 2: Split FLV ka agba
Gbawaa FLV video kwukwara na ndepụta, nri pịa ya na-emeghe a menu nke họrọ "Dezie" nhọrọ. Nke a ga-bugota FLV splitter window dị ka n'okpuru. Ị ga-tumadi ịdọrọ abụọ sliders n'okpuru prograss mmanya ka agba: "Mee amalite mgbe" na "Mee ọgwụgwụ mgbe". Dị ka ogologo oge a nke e debere, pịa "New clip" (The mkpa) bọtịnụ bee ya ka tree. N'ikpeazụ pịa "OK" ịzọpụta clip na tree na-converted na nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 3: Malite kewara FLV faịlụ
Ị ga mkpa ịhọrọ a format ịzọpụta gị gbawara n'etiti FLV videos. I nwere ike ma gbawara n'etiti FLV ka otutu FLV faịlụ, ma ọ bụla ọzọ formats esịne ke Video Ntụgharị. Iji họrọ otu mmepụta foramt, dị nnọọ see Format oyiyi na n'akụkụ aka nri wee họrọ ihe ị chọrọ ebe a. N'ikpeazụ pịa "tọghata" button na-amalite kewara FLV faịlụ na converting ahọrọ usoro.
FLV Splitter maka Mac
The kewara ngwá ọrụ a na-gụnyere na FLV splitter maka Mac, ma ọ na-arụ ọrụ ubé dị iche iche si Windows version. Ị mkpa ka ịgbakwunye FLV duplicates ka isi windows ma kewaa onye ọ bụla karị. Ke akpatre, ewepụtụ FLV faịlụ otu laa.
Jiri Quick AVI cutter bee AVI Files na-enweghị Ogo Loss
TP cutter: Olee otú Bee TP Files na-enweghị omume rụrụ arụ Ogo
Olee otú iji tọghata Grooveshark ka MP3